🥇 ▷ Muxuu & # 039; qarinaayaa Apple ee wajigiisa cusub iyo saaxiibtinimadiisa? ✅
Muxuu & # 039; qarinaayaa Apple ee wajigiisa cusub iyo saaxiibtinimadiisa?
Dhowr falanqeeyayaal ayaa soo jeedinaya in wiilasha Cupertino ay isbedelayaan
Tan iyo qodobka ugu dambeeyay ee Apple kaas oo aan ku arki karno soo bandhigida rasmiga ah ee bulshada ee nidaamka cusub ee hawlgalka mobilada cusub ee shirkadda Californian, iOS 8, jawiga guur-guura ee cusub ee shirkadda, waxaan u badan nahay inaan aragnay wajiga ugu saaxiibka badan shirkadda Californian. taariikhdeeda. Si kastaba ha noqotee, xilligan dad badani waxay la yaabaan haddii kuwa Cupertino ay dhab ahaantii rogeen bogga, iyo qiimaha ay tani u noqon karto mustaqbalka shirkadda.
Naxariista ayaa dishay Apple?
Marka tan la eego, waxa ugu horreeya ee aan u baahan nahay inaan iftiimino ayaa ah in dhowr warbaahin ay horay u soo bandhigeen furfurnaan muuqata oo loogu talagalay warbaahinta, horumariyeyaasha iyo dadweynaha, markii Apple uu ku dhawaaqay bixitaanka shirkadda Katie Cotton, sarkaalka xiriirka dadweynaha ee cabsida leh. Waxay la kulmeen ficil caynkan oo kale ah, khubaro badan oo adduunka Apple ah Waxay dareemeen inay ka baxeen silcin, iyo waxbarid, ilaa ay noqdaan saaxiibo suurtagal ah iyo xitaa la-taliyayaal shirkadda, sida CultofMac dib u eegayo.
Hadda, sidoo kale waa run in qaabkan cusub ee loola xiriiriyo deegaanka uu muujiyey Apple Waqtiyadi ugu dambeeyay, wax yar iyo waxba kuma jiraan dariiqii isaga u horseeday inuu noqdo mid ka mid ah dhakhaatiirta teknoolojiyadda ugu muhiimsan ee adduunka. Taasi waa sababta dad badani hadda u la yaabaan haddii adduunyo kan wanaagsan ay imanayaan kuwa ugu dambeeya, gaar ahaan ganacsiga, naxariis uma dilayo shirkadda Californian wax yar.
Mid ka mid ah codadka la oggolaaday ee aan u dhigmin noocaan waa Aditya Narayan, oo ah Agaasimaha Guud ee TurnToTech, oo ah shirkad kombiyuutarrada ‘iOS’ ah, kaasoo sheegay in muuqaalka kore ee naxariis weyn ee Apple ay la xiriirto “horumar dabiici ah.” Dave Howell, aasaasaha iyo maamulaha Avatron Software; iyo shaqaale hore u ahaa shirkada Kaliforniya, waxay oggol tahay in hada ay jirto ujeedo looga dhigayo kuwa horumarinaya farxad aan horey u maleynaynin.
U dhawaansho horumarayayaasha iyo isticmaaleyaasha
Wixii ka dambeeya ujeeddadan, ee Apple, si ay ula xiriirto warbaahinta iyo horumariyeyaasha, laga yaabee waxa ugu xiisaha badan ee dhammaanteenna ah, ayaa ah in shirkaddu ay iskeed u muujisay sidii aan weligeedba u dhicin waxa ay suuqyadu leedahay, taasi waa, isticmaaleyaasha. Tusaale fiican oo tan ah waa muuqaalka, markii ugu horreysay taariikhdiisa, xarumo waaweyn oo leh shaashado waaweyn, sida lagu caddeeyay iPhone 6 ee soo socda oo leh qaabkiisa 4.7 iyo 5.5 inji.
Hadda, oo ku saleysan dhammaan gunaanaddan, doodaha ku saabsan haddii dib loo furo Apple Waxay si tartiib tartiib ah isu beddelaysaa shirkad raacaysa baahida suuqa illaa ay ka mid noqoto kuwa kale, ama haddii, taa liddi ku ah, waxay sii wadi kartaa inay dirto warshadaha tikniyoolajiyadda inkasta oo wejigeeda cusub ee dhoola caddayn.